नौकुन्डकी लामा नेपालनाम्चाको 'राजनीति'मा
नौकुन्डकी लामा नेपालनाम्चाको ‘राजनीति’मा
८ मा पढ्दै गर्दा २०६५ सालतिर अनेरास्ववियुको स्कुले कमिटीमा आवद्ध भइन् । अहिले कुन्डै कुन्डको गाउँपालिका नौकुन्डकी उपाध्यक्ष छिन् । नियमित स्तम्भ ‘राजनीति‘मा नेपालनाम्चा प्रस्तुत गर्छ, रसुवाली सिर्जना लामा ।
राजनीतिमा कसरी र किन लाग्नु भयो ?
मेरो परिवार नै राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएको कारण पनि मलाई राजनीतिप्रति बढी झुकाव भयो । मेरो बुवा २०५४ सालमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको र हिजोदेखी नै समाजसेवा र राजनीतिमा निरन्तर लागिरहनुभएको थियो । देशको स्थिरता, परिवर्तन र हरेक पाटोको विकास र समृद्धि राजनीतिबाट नै सम्भव र छ । त्यसैले म पनि यसै अभियानमा लागेँ ।
म पहिला अखिलमा रहे पनि सक्रिय हुन सकेको थिइनँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् मात्रै राजनितिमा सक्रिय छु । म अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला कमिटीको सदस्य छु भने पार्टीको बफादार सिपाहीको रूपमा रहेर कार्यभार सम्हाल्दै आएको छु ।
मैले सोचेको जस्तो त सबै प्राप्त भैसकेको छैन र अर्को कुरा राजनीतिमा लाग्न साथ कायपलट भैहाल्छ भन्ने पनि हैन । तर, मलाई यति विश्वास छ, हरेक राजनीतिकर्मीले आफ्नो ठोस भिजन, एजेन्डा र विचारलाई संयोजन गरी कार्ययोजनासहित नेतृत्व गर्ने हो भने सोचेको जस्तो हुन्छ । तर, अहिले राजनीतिक संस्कार अलि बिग्रिएको छ । राजनीतिलाई हेर्ने दृस्टिकोण अलि फरक छ । धेरै विकृति छ । यसलाई विस्तारै सफा गर्दै लानु हामीमा ठूलो जिम्मेवारी छ ।
राजनीतिमा लागेर के पाउनभयो ? गुमाउनुभयो ?
राजनीतिमा लागेर पाउनु र गुमाउनु त अवस्य छ नै । तर, त्यो मात्रै ठूलो कुरा हैन । अहिले भर्खरै मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरी सक्रिय राजनीति गर्दैगर्दा ठुलै उपलब्धि भएको छैन ।
अहिलेको राजनीतिक स्थिति देख्दा सन्तुष्ट पटक्कै छैन । किनभने, हामीले सोचेको जस्तो र हाम्रो पुस्ताले अपेक्षा गरेको जस्तो राजनीति भएको छैन ।
राजनीतिमा लाग्दाका रमाइलाहरु सम्झनु हुन्छ ?
राजनीतिमा लाग्दा धेरै बौद्धिक वर्गसंग भेटघाट अनि अनुभव आदानप्रदान गर्न पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ ।
अनि नरमाइला त ?
जब आफुले निस्वार्थ ढंगले विभिन्न कार्यसम्पादन गरेको हुन्छ, त्यसमा कतिपयले नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्न खोज्दा दुख लाग्छ ।
मेरो बुवाआमा र पार्टीका शिर्ष व्यक्तित्वहरु ।
देशलाई निकास दिने ब्यवस्था, दिगो विकास तथा परिवर्तन गर्ने माध्यम नै राजनीति हो । धेरै मुलुकहरु विभिन्न चक्रब्युमा फसिरहेका छन्, त्यसको निकास नै राजनीति हो ।
पछुतो छैन । खुशी छु । किनकी, म अहिले जुन स्थानमा छु त्यो राजनीतिकै कारण हो ।
राजनीतिबाहेक मेरो रुचिको क्षेत्र संगीत हो अनि समाजसेवा र यस्तै यस्तै ।
राजनीतिमा नभएको भए कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
निजमति सेवातिर प्रवेश भैसकेको हुन्थेँ र सामाजिक कामतिरै खटिरहेको हुन्थेँ ।
पछिल्लो घटनाक्रम देख्दा त फोहोरी खेल नै हो जस्तो लाग्छ । त्यो स्वाभाविक नै हो । किनकी, देशले राजनितिक स्थायित्व खोजिरहेको छ । तर, अझै अस्थिरता बढ्दै गएको छ । अर्को कुरा के हो भने यदि राजनीतिक ब्यवस्था नहुँदो हो त हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुक अहिले कहाँ कसको कब्जामा हुन्थ्यो थाहा छैन । त्यसैले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्दा पनि फोहोर बनाएको हो त्यो फोहोरलाई हटाउन सकिन्छ ।
राजनीतिमा लाग्ने मानिसमा नभई नहुने ३ वटा गुण के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
इमानदरिता, विचार , दुरदृस्टि (भिजन) ।
यसलाई मानिसले आ-आफ्नो ढंगबाट बुझ्ने गर्छन् । तर, राजनीति गर्दैगर्दा विभिन्न अवसरहरु आउँछन् । त्यसैले यो सत्तामा पुग्ने प्रक्रिया त हो तर सत्तामा नपुगेका सबै राजनीतिक ब्यक्तिहरु केही होइन त ? त्यसैले राजनीति भनेको सत्य, न्याय र परिवर्तन गर्ने एउटा दरिलो आधार हो ।
दश बर्षपछि भेट्दा तपाईंलाई राजनीतिमै भेटिन्छ कि अन्तै ?
सायद म राजनीतीमै हुन्छु । नभए पनि म समाजसेवामा भने निरन्तर खटिरहेकै पाउनुहुन्छ ।
साना नानीहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
यो देशको भविष्य भनेको आजका बालबालिका नै हो । त्यसैले अध्ययनमा विशेष ध्यान दिई रचनात्मक र खोज अनुसन्धान गर्ने क्षमता अहिलेदेखि नै बिस्तार गरौं । आ-आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो स्कोप तयार गर्न लागौ ।
मलाई मेरो देश बनेको हेर्ने रहर छ । प्राकृतिक सौन्दर्यले सजिएको मेरो देशमा विकासका अथाह सम्भावना छन् ती सम्भावनालाई अवसरको रूपमा लिइ राजनीतिक ब्यक्तित्वहरुले आफ्नो मिसन र भिजन बनाएर निस्वार्थ रुपमा अघि बढ्न सकुन् शुभकामना !
मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा नेपालनाम्चालाई पनि धन्यवाद ।
‘पेरिस जान दिनुस्, फर्केर १० दिनभित्र राजीनामा गर्नेछु’